Shutter Encoder, mpanova feo sy horonan-tsary azo alaina ho an'ny Ubuntu | ubunlog
Shutter Encoder, mpanova feo sy horonan-tsary azo alaina ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Shutter Encoder isika. Ity dia a free media transcoder ho an'ny Windows sy macOS, izay hitanay ihany koa ho an'ny rafitra Gnu/Linux. Shutter Encoder dia programa fiovam-peo tsara izay ahafahanao mitantana feo sy sary.
Ity programa ity dia natao ho mora azo sy mahomby araka izay tratra. Mampiasa Java miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany toa ny 7za, VLC, FFmpeg, ExifTool, MKVMerge, MediaInfo, DVDAuthor, youtube-dl ary maro hafa. Ny Shutter Encoder dia mampiasa ny FFmpeg mba hifehezana ny fikodiany, manome fanohanana saika ny codec rehetra renao.
Fitaovana ity afaka mamadika sary, horonan-tsary ary raki-peo amin'ny endrika isan-karazany. Izy io koa dia hamela antsika handoro DVD, misintona horonan-tsary avy amin'ny tranonkala ary manana loharano fototra ho an'ny fanovana horonan-tsary, toy ny fanoloana ny horonam-peo amin'ny rakitra video, fanapahana horonan-tsary ary zavatra hafa.
1 Endri-javatra ankapoben'ny Shutter Encoder
2 Mametraka Shutter Encoder Media Transcoder amin'ny Ubuntu
2.1 Amin'ny maha fonosana .DEB
2.2 Toy ny AppImage
Endri-javatra ankapoben'ny Shutter Encoder
Ny programa us dia hamela anao hifidy tsara izay ampahany amin'ny lahatsary dia tafiditra ao amin'ny Output rakitra. Izany rehetra izany amin'ny alalan'ny interface tsara clipping intuitive.
Mampiasa ny fiasa 'Sary' hanana fahafahana hanapaka haingana sy mora foana ny sarintsika ary koa ny horonan-tsary.
Shutter Encoder izany dia ahafahantsika manampy izay sary na horonan-tsary izay tiantsika ho overlay amin'ny sary. Azontsika atao mihitsy aza ny manitsy ny opacity, ny habeny ary ny toerana mivantana ao amin'ny fampiharana.
Izahay koa izany dia ahafahanao mampiseho ny anaran'ny clip, lahatsoratra ary fehezan-potoana ao amin'ny horonan-tsary.
Ao amin'ny fampiharana dia hahita ihany koa a tonian-dahatsoratra mitambatra. Ny encoder shutter dia azo ampiasaina hampidirana dikanteny sy firaketana dikanteny ao anatin'ny tsindry vitsivitsy monja.
Ny endri-javatra iray hafa mahaliana amin'ity rindrambaiko ity dia ny fahafahana misintona horonantsary mivantana avy amin'ny pejin-tranonkala malaza, miaraka amin'ny kalitao avo indrindra. Ilaina fotsiny ny mametaka ny URL ary afaka minitra vitsy dia ho hita ao amin'ny ordinaterantsika ilay horonan-tsary.
endri-javatra fanohanan'ny mpizara FTP sy WeTransfer naorina.
Afaka manao izany isika trim tsy misy re-encode, manolo feo, manoratra indray, mampifanaraka, manambatra, dikanteny ary ampidiro video.
Ankoatra izany dia afaka manao fiovam-peo: WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, AC3, OPUS, OGG.
Ny programa dia hanome antsika ny fahafahana manamboatra ny anaran'ny rakitra output. Afaka manampy prefix sy suffix isika, mampitombo ho azy ny laharan'ny fanondro, ary manolo ny lahatsoratra efa misy. miaraka amin'izay tiantsika.
Shutter Encoder te afaka mitatitra izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny rakitrao. Ilaina fotsiny ny manindry havanana/safidy amin'ireo rakitra filaharana, ary ny programa dia hampiseho antsika famintinana feno momba ny mombamomba azy ireo.
Ireto dia sasany amin'ireo endri-javatra amin'ny programa fotsiny. Afaka izy ireo manatona azy rehetra amin'ny antsipiriany avy ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Mametraka Shutter Encoder Media Transcoder amin'ny Ubuntu
Amin'ny maha fonosana .DEB
Afaka manao izany isika alaivo ny rakitra .DEB avy amin'ny tranokalan'ny tetikasa. Hanana ihany koa ny fahafahana misintona ny kinova farany amin'ity fonosana ity navoaka androany, manokatra terminal (Ctrl+Alt+T) ary manatanteraka ny baiko ao anatiny:
Aorian'ny fampidinana, afaka mametraka ity fonosana ity isika izao mihazakazaka ny baiko:
Rehefa vita ny fametrahana dia tsy misy afa-tsy atombohy ny programa amin'ny fitadiavana ny mpandefa eo amin'ny rafitray na mitendry ny terminal:
Para esory amin'ny programa ity programa ity, tsy maintsy manokatra terminal (Ctrl+Alt+T) fotsiny isika ary manatanteraka izany:
Hanana fahafahana hampiasa Shutter Encoder ao Ubuntu amin'ny alàlan'ny rakitra AppImage ihany koa izahay. Ity rakitra ity dia azo alaina avy amin'ny tranokalan'ny tetikasa. Azontsika atao koa ny misintona ny kinova farany navoaka androany amin'ity rakitra ity, manokatra terminal (Ctrl+Alt+T) ary manatanteraka ny baiko ao anatiny:
Rehefa vita ny fampidinana dia tsy maintsy manome alalana rakitra. Izany no antony tsy maintsy hifindra any amin'ny lahatahiry misy azy, ary amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia ilaina ny manatanteraka ny baiko:
Aorian'ny baiko teo aloha dia azonao atao atombohy ny programa amin'ny fipihana indroa amin'ny rakitra, na amin'ny fanoratana amin'ny terminal iray ihany:
Azo atao izany Fanazavana bebe kokoa momba ity programa ity sy ny fampiasana azy ao amin'ny Antontan-taratasy ofisialy an'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Shutter Encoder, mpanova feo sy horonan-tsary azo alaina ho an'ny Ubuntu
Efa nivoaka ny FFmpeg 5.0 "Lorentz" ary ireo no vaovao
Namoaka Plasma 5.24 Beta ny KDE, ary mitondra vaovao ho antsika toy ny hoe afaka manamboatra izay rindrambaiko manokatra ny rohy tel: // sy geo://